September 6, 2021 sonsonlinlin 0
ရည်းစားဖြစ်ပြီး ၂နှစ်လောက်မှာ နှစ်ယောက်သား ပိုက်ဆံစုရအောင်လို့ စပြီးတိုင်ပင်ဖြစ်ကြတယ် အဲ့ဒါနဲ့စုမယ်ဆိုပြီး ငွေစစုဖြစ်သွားတာပေ့ါ တစ်လတစ်ခါ ဘဏ်ထဲငွေထည့်မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ် လိုက်တယ် ကိုယ်ကတော့ လခစား ဝန်ထမ်းဆိုတော့ အများကြီးမစုနိုင်ဘူး (၃ပုံ၁ပုံလောက်ပေ့ါ) တစ်လ နှစ်ယောက်ပေါင်း ၁သိန်း စုကြမယ်ဆိုပြီး ဘဏ်စာအုပ်လေးလုပ်လိုက်ကြတယ် Bank account ကိုလဲ ၂ယောက်နာမည်နဲ့ KBZ_Call_Deposits_account လုပ်ထားလိုက်တယ် အဆင်ပြေတဲ့လူ သွားလို့ရအောင်ပေါ့ အဲ့လိုနဲ့ စု လာလိုက်တာ ဘဏ်စာအုပ်လေး ၂နှစ်နဲ့ ၄လ […]
လက်ဝါနှစ်ဖက်ကို ပူးကပ်ကြည့်ပြီးသင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်က ဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုတာမှန်းလို့ရပါတယ်…
လက်ဝါနှစ်ဖက်ကို ပူးကပ်ကြည့်ပြီးသင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်က ဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုတာမှန်းလို့ရပါတယ်… ဒီတစ်ခါပြောပြမှာကတော့ လက်နှစ်ဖက်ကို ပူးကြည့်လိုက်လို့ သင့်ချစ်သူ ဘယ်လိုပုံစံမျိုး ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပါ ….။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ၁၀၀% မှန်တယ်လို့တော့ မဆိုလိုပါဘူး။ သင့်ချစ်သူရဲ့ လက်ဖဝါးကို ကြည့်လိုက်ပါ …။ သင့်ချစ်သူရဲ့ လက်ဖဝါးက အချစ်လမ်းကြောင်းကနေ သူတို့ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားကို အနည်းငယ် မှန်းဆကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူတို့ရဲ့ စိတ်သဘောထားနဲ့ တိုက်ဆိုင်တယ်မဆိုင်ဘူးဆိုတာကို ဝေဖန်ချက်ပေးလို့ ရပါတယ်နော် …။ ၁။ လက်ဖဝါးပေါ်က အချစ်ရေးလမ်းကြောင်း […]
ဆံသားဖြောင့်စင်းပြီး အရှည်မြန်စေဖို့ Vaseline နဲ့ပေါင်းတင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း Vaseline ဆိုတာ အလှအပရေးရာ အကုန်လုံးအတွက် တော်တော်အသုံးဝင်တဲ့ ပစ္စည်းကောင်လေးပါ။ ဒီတစ်ခါမှာလည်း မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ ဆံသားကို ဖြောင့်ဆင်းပြီး အရှည်မြန်လာစေဖို့ Vaseline က ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုပေါင်းတင်ရမလဲ Vaseline အပြင် ဘာတွေထည့်ရမလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ရအောင်။ သန့်ရှင်းတဲ့ပန်းကန်လုံးထဲကို Vaseline – လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း၊ အုန်းဆီ – လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း၊ ရှားစောင်းလက်ပတ်ဂျယ် (Aloe Vera Gel) […]
အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ စီးပွားရေးကို လုံး၀ ပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့ ယိုပေါက်ကြီး(၆)ခု
အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ စီးပွားရေးကို လုံး၀ ပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့ ယိုပေါက်ကြီး(၆)ခု မြတ်စွာဘုရား ဟောထားတာကတော့ လောကမှာ စီးပွားရေးပျက်ရာ ၊ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့ ယိုပေါက်ကြီး (၆) ခုဆိုတာ ပစ္စည်းဥစ္စာဟာ ဘယ်တော့မှ မတည်ဘူးတဲ့ …။ မြန်မာတွေကတော့ ပြောကြတယ်“လူမိုက်နဲ့ငွေ” အတူမနေဘူးတဲ့ ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာဟာ ပျောက်သွားတယ် …။ မြတ်စွာဘုရားက ဘာကိုဟောသလဲဆိုရင်… နံပါတ်(၁)က အာလသျ – လူပျင်းနဲ့ဆိုရင် ငွေဟာ အတူမနေဘူးတဲ့ …။ ပျင်းရိလို့ရှိရင် ပျင်းတယ်ဆိုတာ […]
အသက္ ၂၆ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း မိန္းမယူဖို႔ေနေနသာ ရည္းစားပင္တစ္ခါမွမထားဖူးတာေၾကာင့္ အိမ္ကေမာင္းခ်ခံလိုက္ရေသာ ေကာင္ေလး
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ အသက် ၂၆နှစ်အရွယ် ကောင်လေးတစ်ဦးသည် အိပ်ရာလေးနှင့်အတူ လှေကားအောက်ခြေတွင် ဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နှင့် မှိုင်တိုင်တိုင်လေး ထိုင်နေခဲ့သည်။ ကောင်လေးသည် အမှန်မှာ အခြားနယ်ဝေးသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီး ပြန်လာချိန်တွင် မိသားစုမှ မိန်းမမယူနိုင်သေးလို့ဆိုပြီး အိမ်ပေါ်ကမောင်းချခဲ့သည်။ မိဘနှစ်ပါးသည် သားဖြစ်သူကို အိမ်ထောင်ကျပြီး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ပျော်ရွှင်စရာ ဘဝလေးကို ဖြတ်သန်းစေလိုသော်လည်း သားဖြစ်သူမှာ အချစ်ရေးကံစေသူဖြစ်ပြီး မိန်းမရဖို့ လမ်းပျောက်နေခဲ့သည်။ အိမ်နီးနားချင်းမှလည်း မိဘနှစ်ပါးကို တွေ့လိုက်တိုင်း သားကမိန်းမမယူသေးလား ဆိုပြီး မေးမေးနေကြ၍ […]
ေႏွာင္းလူေတြမသိေတာ့တဲ့ ဝါတြင္းမဂၤလၤာမေဆာင္ရျခင္း ႏွင့္ ဗိႆႏိုးနတ္ အိပ္စက္ျခင္း ဆက္စပ္ေသာ အယူအဆ
အသားေရ စိုေျပၿပီီး ဝက္ၿခံကင္းေစဖို႔ နည္းလမ္းေကာင္း…
အသားရေ စိုပြေပြီး ဝက်ခြံကင်းစေဖို့ နည်းလမ်းကောင်း… ကျွန်မတို့လို အသက် ၄၀ နားနီးတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မတွေသာမက အရွယ်ရောက်ပီးတဲ့ ပျိုမေတို့အားလုံး ခုချိန်ကစပြီး Skin care သေချာလေး လုပ်သင့်ပါတယ် …။ အသားဖြူတာ ညိုတာထက် အသားအရေ ကောင်းပြီး စိုပြေလှပဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်မဆို အသားညိုတဲ့ ထဲမှာပါတယ် ။ နောက်ပိုင်း ရေများများသောက် အသီးအရွက် များများစားတော့ အသားအရေ သိသိသာသာ စိုပြေလာတယ် …။ […]
ဒူးနဲ့ တံတောင်ဆစ်ပေါ်က အမည်းကွက်တွေကို ဖယ်ရှားနည်း
ဒူးနဲ့ တံတောင်ဆစ်ပေါ်က အမည်းကွက်တွေကို ဖယ်ရှားနည်း… တံတောင်ဆစ်နောက်က အမည်းကွက်၊ အညိုကွက်တွေကြောင့် အင်္ကျီလက်တို ဝတ်ရာမှာ ကြောက်နေသူတွေ၊ ဒူးမည်းနေလို့ စကပ်တို၊ဘောင်းဘီတို ဝတ်ရမှာ စိတ်ညစ်နေတဲ့ ပျိုမေတို့ အတွက် နည်းလမ်းကောင်း ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန် သက်သာပြီး ဒူးမည်း၊တံတောင်မည်းနေတာတွေကို ဖယ် ရှားပေးနိုင်တဲ့ သဘာဝနည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့…. (၁) အုန်းဆီ” အုန်းဆီဟာ ဒီလိုအမည်းကွက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ သဘာဝနည်းလမ်းပါ ။သူ့မှာဆိုရင် […]
သားျဖစ္သူကို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ အရင္းႏွီးဆုံးသူငယ္ခ်င္းထံ အကူအညီေတာင္းလိုက္ရာမွ တစ္ခါတည္း ေခြၽးမေတာ္ပစ္လိုက္ရသည့္အျဖစ္
သားဖြစ်သူကို ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးရန် အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းထံ အကူအညီတောင်းလိုက်ရာမှ တစ်ခါတည်း ချွေးမတော်ပစ်လိုက်ရသည့်အဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံမှ အသက် ၄၀နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် ငယ်စဉ်ကဆိုးတူကောင်းဖက် ပေါင်းခဲ့သော အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းလေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ရာ အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက် သူတို့နှစ်ဦးမှာ အရင်လိုဆက်ဆံရေးမျိုးမဟုတ်တော့ပဲ ကွဲသွားကြတော့သည်။ ထို့နောက် အမျိုးသမီးသည် အိမ်ထောင်ကျပြီး တစ်နှစ်လောက်အကြာတွင် သားလေးမွေးခဲ့ပြီး သူငယ်ချင်းဖြစ်သူနှင့် လမ်းမှာပြန်တွေ့စဉ် သူမသည် ရည်းစားအတည်တကျပင်မရှိသေးပဲ အပျိုကြီးမမသာ ဖြစ်နေခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးလည်း အိမ်ကိုအလည်ခေါ်ခဲ့ပြီး သားလေးနှင့်လည်း မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး ၈နှစ်အကြာမှာတော့ အလုပ်ကိစ္စနှင့် နယ်ဝေးရပ်ခြားသို့ […]
အချစ်ကြီးသလောက် အမျက်ကြီးတတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူး ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် အမှန်တရားကို နှစ်သက်ကြပြီး တစ်ယောက်ထဲ နေထိုင်ရခြင်းကို မြတ်နိုးတက်ကြပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ညစ်နေပါစေ ကိုယ်ရဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ ပျော်ရွှင်လာအောင် အဆင်ပြေအောင် ကူညီပေးတတ်ပါတယ်နော်…. တစ်ခါတလေမှာ သူငယ်ချင်းများအပေါ် နွဲ့ဆိုး ဆိုးပေမဲ့ ရစ်တတ်ကြပေမဲ့ အနစ်အနာ အရမ်း ခံတတ်တဲ့ စိတ်ကြောင့် သူငယ်ချင်းများက အရမ်း ခင်မင်နေကြပါတယ်။ တခါ တစ်ခါ ရုပ်တည်နဲ့ ဆေးထိုးတတ်ကြပါတယ်။ကိုယ်နဲ့ မသိတဲ့ […]